उपत्यकामा एकाबिहानै भुकम्पले हल्लाएपछि... - Himal Dainik
३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:२६
काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार बिहानै भुकम्प गएको छ।
बिहान ५ बजेर १९ मिनेट जाँदा उपत्यकामा भुकम्प गएको हो। यसको आधिकारिक पुष्टि गर्न तथा भुकम्पको केन्द्रविन्दु तथा यसको मापनबारे भुगर्भ विभागले जानकारी दिन बाँकी नै छ। बिहानै भुकम्पले हल्लाएपछि कतिपय मानिसहर हतारिएर घर बाहिर निस्केर सामान्य हल्लाखल्ला गरेका थिए।
अघिल्लोमन्त्री वा सांसद नभएर के भो? सल्लाहकार कै हैसियतमा भएपनि टिकिन्छ बालुवाटारमा र खाइन्छ राज्यकोषको भत्ता!
पछिल्लोसिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार बिहानै ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प